Yintoni i-retinol kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo | Bezzia
Yintoni i-retinol kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo
UToñy Torres | | Unyango lobuhle
I-Retinol sisithako esisebenzayo kwifashoni kwimiba yobuhle, yenye yezo zinto zithandwa ziidermatologists. Le khompawundi ikhuselekile ngokupheleleyo kwimpilo, nangona kunjalo, xa uqala ukuyisebenzisa, inokubangela iziphumo ezibi. Kwezinye iimeko, ukusetyenziswa kwe-retinoids kunokubangela ulusu olomileyo, ukucaphuka okanye ukucoca. Ke ngoko, kubalulekile ukwazi ezinye iingcebiso kunye namaqhinga ukuze wenze ngokuchanekileyo.
Okwangoku i-retinoids inokuthengwa kwizinto zokuthambisa, apho iidosi ezithile sele zikhona. Leyo yindlela ekhuselekileyo nelula yokufaka iretinol kwindlela yakho yobuhle. Kodwa ukuba ufuna ukujonga iziphumo kwisikhumba sakho ngendlela egqibeleleyo, kufuneka usebenzise isithako esisebenzayo ngendlela ecocekileyo. Kulapho kufuneka uqaphele ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo kwaye ugweme ezi ngxaki zesikhumba ezinokwenzeka.
1 Yintoni i-retinol kwaye isetyenziselwa ntoni?
1.1 Uyisebenzisa njani i-retinol
Yintoni i-retinol kwaye isetyenziselwa ntoni?
I-Retinol iye yaba sesinye sezithako ezingenakuphoswa kwimiba yezithambiso malunga neminyaka engama-40. Ngaphambili yayisetyenziselwa ukunyanga iingxaki zolusu, njenge-acne. Emva kwexesha, xa zonke izibonelelo zale khompawundi ulusu zifunyenwe, yaqala ukusetyenziswa ukunyanga amabala ubudala, imibimbi kunye nokuthintela ukuguga kwangaphambi kwexesha.
I-retinol iphuma kwi-vitamin A, kunye nezinye i-retinoids ezifana ne-retinoic acid. Le vithamini ibalulekile kumzimba, kuba inoxanduva lokukhuthaza ukuvuselelwa kweeseli. Xa iiseli zikhula, onke amalungu angaphandle ayaguga ngokulandelelana, njengolusu, iinwele okanye iinzipho. Ngoko, kuyimfuneko ukubonelela ngezondlo ezithintela ukuguga kwamaselula, ukusuka ngaphakathi, ukuya ngaphandle.
Ukutya koko kubonelela ngezondlo ezifunwa ngumzimba ukuze ube sempilweni, womelele, ube nempilo kwaye uthintele ukuguga ngaphambi kwexesha. Ukhathalelo lwangaphandle, kwelinye icala, sinalo izinto zokuthambisa ezisinceda ukuba sinyamekele ulusu lwethu, iinzipho okanye iinwele. Ngoko ukuba kunokwenzeka gcina umzimba omncinci, usempilweni kwaye womelele, ngenxa yenkathalo efanelekileyo.
Uyisebenzisa njani i-retinol
Lo mgaqo osebenzayo Kucetyiswa ukusuka kwiminyaka engama-25 okanye engama-30, kuba ngaphambi kokuba akuyomfuneko. Ngakolunye uhlangothi, akukhuthazwa ngabasetyhini abakhulelweyo, abo bancelisayo okanye abo bafuna ukukhulelwa. Kufuneka ulumke kwakhona xa usebenzisa i-retinol, njengoko inokubangela ubuntununtunu ekukhanyeni kwelanga. Ngoko kuyacetyiswa ukuba usebenzise ebusuku ukuphepha imiphumo yemitha yelanga.
Qala ukusebenzisa i-retinol ngokuthe ngcembe, ukuvumela ulusu ukuba lulungelelanise kwesi sithako kunye nokuphepha imiphumo emibi. Ekuqaleni, unokuyisebenzisa kanye ngeveki, emva kweenyanga ezimbalwa kwaye uqaphele indlela ulusu olusabela ngayo, ungayifaka kwindlela yakho yobuhle rhoqo kwaye ngaphandle komngcipheko. Kubaluleke kakhulu ukuba ungaxubani nezinye iiasidi, ngakumbi kunye nalawo aqukethe i-ascorbic acid. Oko kukuthi, i-vitamin C, ekubeni ezi zixhobo azihambelani kwaye zingabangela ukusabela okubi.
Faka imveliso ngokuthe ngqo kwisikhumba esicocekileyo, esomileyo. Mhla uza kusebenzisa i-retinol, akufuneki usebenzise ezinye iikhompawundi, okanye uzikhuphe ukuze uphephe ukuba nolusu olunovakalelo olugqithisileyo. Lindela malunga nemizuzu engama-30 emva kokucocwa kobuso, ngaphambi kokufaka i-compound. Faka isicelo esincinci se-retinol, kubaluleke kakhulu ukuba ungayisebenzisi kakubi ngokusetyenziswa ngalunye.
Ukugqiba, emva kokusebenzisa i-retinol ungasebenzisa i-moisturizer. Nangona kule meko, kufuneka uqinisekise ukuba ayinayo i-retinoic acids, okanye nayiphi na enye i-asidi okanye i-compound enokuthi ingahambelani ne-retinol. Khumbula ungasebenzisi le ngqungquthela kwiinkophe, kwimijikelezo emnyama, ejikeleze impumlo okanye emlonyeni. Ekubeni ezi ndawo zibuthathaka kakhulu kwaye i-retinol inokubangela ukucaphuka. Ngezi ngcebiso, ulungele ukubandakanya i-retinol kwindlela yakho yobuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Unyango lobuhle » Yintoni i-retinol kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo
Ingozi yekratshi phakathi kwesibini
9 Iibhatyi eziphothiweyo zokukhusela kwingqele